Mampiantrano Siriana Miozolmana iray Mpitsoaponenana ity Fianakaviana Jiosy Ao Berlin ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2016 3:32 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Ελληνικά, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Ny fianakaviana Jellinek ao an-tranony ao Berlin, miaraka amin'ny vahinin-dry zareo, Kinan, Siriana iray mpitsoaponenana (faharoa avy any ankavia). Rehefa nilaza tamin'i Kinan i Chaim Jellinek fa hoe Jiosy izy, nambaran'i Kinan fa tsy manana olana amin'izany izy. Sary: Daniel Estrin. fampiasàna nahazoana alàlana
Ity lahatsoratr'i Daniel Estrin ity dia niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 28 Jona 2016, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Rehefa nandao ny tranony ny zanaka lahin-dry Jellineks, 20 taona, dia mpitsoaponenana iray, 28 taona avy any Siria, no tonga nonina tao an-trano.
“Nalalaka ny efitra,” hoy i Chaim Jellinek, dokotera iray ao Berlin. “Ary hoy izahay, ‘OK, andramantsika.’”
An-jatony maro ireo Siriana mpitsoaponenana vokatry ny ady no noraisin'i Alemaina tamin'ny taona lasa. Mampiantrano mpitsoaponenana ny sasany amin'ireo Alemàna.
Saingy miavaka amin'ny maha-fianakaviana Alemàna Jiosy azy ny fianakaviana Jellinek, tamin'ny fampiantranoana miozolmana Siriana iray ao an-tokantranony nandritry ny fotoana naharitra — tao anatin'ny fotoana izay nitomboan'ny fisalasalàna teo amin'ireo Alemàna, indrindra fa ireo Alemàna Jiosy, momba ireo olona efa ho iray tapitrisa sy sasany tonga ao amin'ny fireneny, avy any Afovoany Atsinanana no ankamaroany.
“Mihevitra aho fa te-handray mpitsoaponenana ny maro amin'ny vondrom-piarahamonina Jiosy. Zavatra iray etsy ankilany izay,” hoy i Chaim Jellinek, mipetraka eo amin'ny efitranony fandraisana vahiny ny harivan'ny Zoma alohan'ny sakafon'ny Sabata. “Etsy andaniny dia betsaka ny vahoaka Jiosy matahotra ny Silamo henjam-pihetsika.”
Joseph Schuster, lehiben'ny Filankevitra Foiben'ireo Jiosy ao Alemaina, nilaza tamin'ny gazety Alemàna iray tamin'ny Novambra fa tokony hametraka fetra ihany amin'ny isan'ireo mpifindramonina tonga ao aminy i Alemaina.
“Maro amin'ireo mpitsoaponenana no mandositra ny horohoron'ny Fanjakana Islamika ary maniry hiaina ampilaminana sy an-kahalalahana,” hoy i Schuster tao anatin'ilay tafa. “Mandritra izay fotoana izay ihany, tonga any amin'ireo toerana izay manana ny fankahalàna Jiosy sy ny tsy fifandeferana tafiditra ho ampahany tafiditra ao anatin'ny kolontsaina ry zareo.”
Ry Jellineks dia mpikambana ao amin'ny sinagoga mpandala ny fitoviana ao Berlin izay mpandray anjara mitovy amin'ny raharaha rehetra ireo lehilahy sy vehivavy ao aminy. Sinagoga iray nogiazan'ny tafiky ny Nazi tany aloha tany izy io ary nampiasainy ho toy ny fanatobiana entana.
Niditra amin'ny fanampiana ireo mpitsoaponenana ilay tempoly, ary nanokan-tena ihany koa ry Jellineks ho amin'izany raharaha izany, amin'ny fiarahana mamatsy fikambanana iray manohana ireo mpitsoaponenana, FREEDOMUS, izay namoaka boky kely fampahafantarana ho entina manampy ireo mpitsoaponenana hiatrika ny fahasarotan'ny fidirana ho anatin'ny fiarahamonina ao Alemaina.
“Tena heveriko fa izany no hany fomba hamahàna ilay olana, mifandray amin'ireo mpitsoaponenana ary mandray azy ireo,” hoy i Chaim.
Izy sy Kyra vadiny dia nirotsaka an-tsitrapo miaraka amin'ireo Siriana mpitsoaponenana rehefa nandre ny momba an'i Kinan, mpiasa iray tamin'ny fivarotana fanafody, nandositra an'i Damaskaosy toerana nahaterahany, nanao dia lavitra ezaka avy any Tiorkia namakivaky ranobe ho any Gresy, ary ny ilany avaratra manontolo ho any Alemaina.
Kinan, izay nangataka ny mba ho antsoina amin'ny fanampin'anarany, dia nonina tanaty toedraharaha sarotra tao aminà toby iray natao ho an'ny mpitsoaponenana ao Alemaina.
Rehefa nihaona taminy i Chaim Jellinek, nolazainy an'i Kinan fa Jiosy ny fianakaviany — ary nanambara i Kinan fa tsy manana olana amin'izany. Kinan no mampahatsiahy eto.
“Avy any amin'ny toerana iray misy ady ianao, ary misy olona mandray anao,” hoy izy. “Ho anao, toy ny olona iray tena tsara izy.”
Ambaran'i Kinan fa misy tsy fifanarahana mafaitra eo amin'ny Arabo sy ny Jiosy any Afovoany Atsinanana, saingy tsy nijery ny Jiosy velively ho toy ny fahavalo izy. Eny, misy fifankahalàna eo amin'i Israely sy Siria, saingy resaka politika izany ary tsy misy idirany amin'ny resaka finoana, hoy i Kinan.
Kinan, Siriana iray mpitsoaponenana, mikarakara sakafo ho an'ilay fianakaviana Jiosy ny harivan'ny Sabata tao Berlin. Lahatsary tamin'ny Youtube no nianarany nahandro. Sary: Daniel Estrin. Fampiasàna nahazoana alàlana
Kinan no tomponandraikitra amin'ny sakafo harivan'ny Sabata. Mivezivezy mijery ireo lapoaly efatra ketrehina eo ambony fàtana izy: vary nasiana hanitra; kawwaj, karazana lasopy Siriana izay nataony avy amin'ny voatabia sy tongolobe, totonkena sy tongolo gasy; ary lasopy ‘lentille’.
Tamin'ny lahatsary Youtube no tena nianarana nahandro, hoy i Kinan. Nanomboka tamin'ny fikarakarana sakafo ho azy tenany rehefa nandao an'i Damaskaosy tamin'ny sitrapony.
Rehefa vonona ny sakafo, mitangorona manodidina latabatra iray lehibe i Kinan sy ry Jellineks : Chaim, Kyra, ary ireo zanany efatra: Lilli, 8 taona; Joshy, 12; Rosa, 18; and Béla, 20.
Nanolotra yarmulkes (kippa ho an'ny mpiteny frantsay, sarotra boribory kely fanaon'ny Jiosy eny amin'ny loha) hanaovan'ireo zanany lahy i Chaim. Nanao iray koa i Kinan .
Tononin'ny fianakaviana manoloana ireo labozian'ny Sabata, ny divay ary ny mofo ‘challah’ ny tsodrano. Dia nihinana sy nivazivazy ora maro ry zareo.
Nihomehy niaraka tamin'izy ireo i Kinan. Avy eo niaiky izy fa tsy dia mbola mahazo betsaka loatra amin'ny teny Alemàna. Nihomehy ny rehetra teo an-databatra, izy koa anisany.
Manaraka kilasy fianarana ny teny Alemàna, amin'ny ora feno, izy, ary matetika no manampy azy hanao ny entimodiny ireo ankizin-dry Jellinek.
“Mahafinaritra, satria mianatra betsaka avy amin'ny fifampizaràn'ny andaniny sy ny ankilany ianao — toy ny fomba fahandroana, ny fankalazana ny Sabata,” hoy i Rosa Jellinek, 18 taona.
“Herinandro vitsy lasa izay, nirary torimaso sambatra ho ahy izy, saingy tamin'ny fomba tsy izy (fiarahabana rehefa hariva no notononiny). Ok, hoy aho, tsy izany no tokony ho teneninao fa ‘tafandria mandry’, ary tsy haiko izany, ‘alina tsara’ izany, na izay hafa mety filazanareo azy amin'ny teny Anglisy,” hoy i Rosa.
“In-telo nandiso ny fiteny azy io izy nandritry ny alina telo taorian'izay, saingy avy eo nanomboka niteny azy araka ny tokony ho izy,” hoy Rosa manampy. “Nahafinaritra ny nahita hoe nahay teny Alemàna misimisy kokoa izy, ary afaka manampy azy aho.”
Ny fianakaviana Jellinek mandrehitra ireo labozian'ny Sabata ny alin'ny Zoma. Ambaran'i Chaim Jellinek fa ny fandraisana ireo mpitsoaponenana no heveriny ho hany fomba tsara hampidirana azy ireo ho ao anaty fiarahamonina. Sary: Daniel Estrin. fampiasàna nahazoana alàlana
Ery ambony sezalava, nandinika ny fomba fandraisana mafana ataon'ny fireneny an'ireo mpitsoaponenana i Chaim Jellinek.
“Ity no iray amin'ireo zavadehibe te amin'ny fiainako satria miaraka amin'ny fotoana toy izany, Alemaina iray hafa mihitsy no hitanay, zavatra tsy mbola fahitanay tany aloha tany,” hoy i Jellinek. “Malala-tsaina. Tia namana, tena tia namana.”
Taona maro tany aloha tany izy no nivadika nanaraka ny Jodaisma. Tafavoaka velona tamin'ny ‘ghetto’ tao Budapest nandritry ny Ady Lehibe faharoa ny renin'i Kyra. Tsapan'ilay fianakaviana ny olan'ny maha-Jiosy ao Alemaina taorian'ilay famonoana faobe .
Satria i Alemaina nandray ireo mpiavy avy amin'ny finoana samihafa, dia ambaran'i Chaim fa na izay aza dia mahatsapa mahazo aina kokoa.
“Tena tsara vintana izahay tafahaona tamin'i Kinan,” hoy i Chaim . “Nanokatra varavarana iray ho anay izy hahafahanay mijery ny firenenay amin'ny fomba hafa.”
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Frank Hessenland.